Fanadihadiana horonan-tsary momba ny Huawei P9 Lite, notsapatsapainay tsara | Androidsis
Tamin'ny herintaona Huawei namafa ny Huawei P8 Lite, terminal iray izay nanolotra sanda ara-bola tsy hay tohaina ary nahatonga an'ity mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana Lite ity ho mpaninjara indrindra. Ankehitriny dia anjaran'ny Huawei P9 Lite.
Rehefa avy naneho anao ny zavatra tsapako rehefa avy nampiasa ny zokiny lahy nandritra ny 6 volana, dia anjaran'ny feno izao Review Huawei P9 Lite, tonga ny telefaona iray ho lasa mpanjaka vaovao eo amin'ny antonony. Ny mari-pahaizana momba anao? Volavola tsara, fampisehoana mifanaraka ary fakan-tsary hahagaga anao.
1 Volavola iray manokana izay manaraka ny tsipika tadiavin'i Huawei
1.1 Na dia manana vatana vita amin'ny polycarbonate aza ny Huawei P9, dia nahavita milamina sy mifandanja ny mpanamboatra nefa tsy mitombo ny vidiny.
2 Toetra mampiavaka ny Huawei P9 Lite
2.1 Miaraka amin'ny Huawei P9 Lite dia tsy hanana olana amin'ny filalaovana lalao ianao satria manana solo-tena solvent izay mamela anao hamindra rindrambaiko, na firy na firy ny sary ilaina.
3 Tontonana IPS, fahombiazana lehibe
4 Ny fakantsary Huawei P9 Lite dia gaga amin'ny kalitaon'ny fakana azy
4.1 Ny fakantsary an'ny Huawei P9 Lite dia manana maody matihanina izay hahafaly ireo tia sary
4.2 Ohatra amin'ny sary nalaina tamin'ny Huawei P9 Lite
5 Fahaleovan-tena mihoatra ny ampy
6 EMUI 4.1 manatsara ny olan'ny kinova taloha
7.1 Sarin'ny sary an'ny Huawei P9 Lite
Volavola iray manokana izay manaraka ny tsipika tadiavin'i Huawei
Mbola tadidiko tsara ny HTC One M7, fitaovana iray niavaka noho ny kalitaon'ny famaranana. Ary fotoana tsara ireto ho an'ireo mpampiasa izay maniry telefaona misy famolavolana premium sy fitaovana. Ary mivory indray ny Huawei P9 Lite.
Ny ekipa mpamolavola Huawei dia nahatakatra tsara ny mitady fitaovana mendri-kaja raha ny momba ny fananganana telefaona, ary miasa mafy izy mba hahatonga ny fitaovany ho tsara tarehy sy hahatsapa ho tsara.
Noho izany, na dia manana vatana vita amin'ny polycarbonate aza ny Huawei P9, ny mpanamboatra dia nahavita napetraka mirindra sy mifandanja tsy misy ny vidin'ny lanitra.
Ary izany ve ny telefaona namboarina manodidina ny chassis vy izay manome ny Huawei P9 fikitihana premium indrindra, ankoatry ny fanolorana fangejana tsara. Ny vera eo anoloana dia apetraka tsara amin'ny zorony somary miolaka izay manamora ny fitazonana ilay terminal.
Su fonony aoriana it is vita amin'ny plastika miaraka amin'ny endrika borosy izay manahafa ny aliminioma, na dia mikasika azy aza ianao dia mazava fa polycarbonate izy io. Mazava ho azy, ny fikasihana dia tena mahafinaritra sy tsy voan'ny tasy, mahatratra ny famaranana tena tsara.
Na dia manana vatana vita amin'ny polycarbonate aza ny Huawei P9, dia nahavita milamina sy mifandanja ny mpanamboatra nefa tsy mitombo ny vidiny.
Amin'ny fandrefesana ny X X 146.8 72.6 7.5 MG ary milanja 147 grama fotsiny, ny Huawei P9 Lite dia telefaona tena ahazoana aina sy mora azo ampiasaina tsy misy olana amin'ny tanana iray. Ary raha dinihina fa miorina amin'ny tontonana 5.2-inch izy io dia tsy maintsy lazaina fa nanao asa tena tsara i Huawei.
Ny telefaona manana tsipika kilasika sy kanto, manaraka ireo modely teo aloha ary mampiseho an'io fombany io izay manenika an'i Huawei ao amin'ireo fitaovany. Any aoriana dia hihaonantsika voalohany ny fakantsariny 13 megapixel miaraka amin'ny flash LED.
Tsy misongadina ny fakantsary ka tsy hanana hump mahasosotra hitantsika amin'ny fitaovana hafa isika. Etsy ambany fotsiny no nametrahan'izy ireo ny sensor ho an'ny rantsantanana. Raha ny tenako manokana dia tsara ho ahy io toerana io, ahazoana aina kokoa noho ny amin'ny faritra voalohany, fa ny fanandramana ny lokony.
Farany manana eo amin'ny farany ambany isika sary famantarana ny marika. Ny sisin'ny aliminioma dia misy eo amin'ny ilany ankavanana miaraka amin'ireo bokotra fanaraha-maso ao anaty boky ankoatra ny lakilen'ny on / off an'ny terminal.
Ireo bokotra rehetra ireo dia manolotra fikitika mahafinaritra sy fahatsapana faharetana, ary koa manolotra dia lavorary. Ny bokotra herinaratra dia manana fahamendrehana ahafahana manavaka azy amin'ny fanalahidy fanaraha-maso ny volume, na dia aorian'ny fampiasana maharitra aza dia ho hitanao eo ny toerana misy ny bokotra tsirairay.
Tsy toy ny Huawei P9, ny maodely Lite dia manana ny vokatra jack 3.5 mm eo an-tampony, raha eo amin'ny faritra ambany dia ho hitantsika ny fivoahan'ny mpandahateny, port USB micro ary ny mikropono. Ary farany, eo amin'ny ilany havia amin'ny terminal no hananantsika ny slot hametahana karatra SIM nano ho fanampin'ny slot micro SD card.
Ny eo alohan'ny Huawei P9 Lite dia mitovy amin'ny an'ny zokiny lahy, miaraka amina ambany ny logo an'ny mpanamboatra ary fakan-tsary misy taratra LED eo an-tampony. Ny efijery dia manararaotra ny ankamaroan'ny eo anoloana, izay manana zana-kazo kely indrindra.
Tsy misy azo kianina amin'ity lafiny ity. Raisina an-tsaina izany ny Huawei P9 Lite dia mitentina 249 euroNy famaranana dia mifanaraka amin'ny vidiny, ary koa fitaovana iray izay mahatsapa tena tsara ao an-tanana.
Toetra mampiavaka ny Huawei P9 Lite
modely P9 Lite
efijery IPS 5'2 "miaraka amin'ny haitao 2.5D sy ny vahaolana 1920 x 1080 HD mahatratra 423 dpi
processeur HiSilicon Kirin 650 (efatra Cortex-A 53 cores amin'ny 2.0 GHz ary core Cortex-A53 efatra amin'ny 1.7 GHz)
Tahiry anatiny 16 azo ovaina amin'ny alàlan'ny MicroSD hatramin'ny 128 GB
Fakan-tsary aoriana 214 MPX Sony IMX13 sensor misy 2.0 aperture / autofocus / detection face / panorama / HDR / LED dlash / Geolocation / 1080p fandraisam-peo video XNUMX
Fakan-tsary mialoha 8 MPX miaraka amina aperture 2.0 / Flash amin'ny alàlan'ny horonan-tsary / 1080p
Fitaovana hafa Radio / sensor / fanamafisam-peo FM
vidiny 249 euro amin'ny Amazon
Androany ny fahasamihafana eo amin'ny fampisehoana eo anelanelan'ny elanelam-potoana sy ny haavo ambony dia manomboka manjavozavo hatrany. Ary, araka ny hitanao tamin'ny fandinihana video amin'ny teny Espaniôla miaraka amin'ity lahatsoratra ity, ny Huawei P9 Lite dia miasa tsara mamela anao hifindra ny lalao na ny fampiharana, na inona na inona loharano ilainao, tsy misy olana.
Ary ny P9 Lite dia finday avo lenta misy endri-javatra tena feno. Hanomboka amin'ny firesahana momba ny fony silikona aho, noforonin'ny iray amin'ireo vahaolana Huawei, ilay mpikirakira HiSilicon Kirin 650, SoC valo fototra amin'ny fikirakirana LITTLE lehibe (4 Cortex A 53 cores amin'ny 2.0 GHz ary 4 Cortex A 53 hafa amin'ny 1.7) miaraka amina maritrano 64 ary izany, miaraka amin'ny Mali T880 MP2 GPU sy fahatsiarovana RAM 3 GB, mampanantena tady mandritra ny fotoana kelikely.
Mihetsika haingana dia haingana ny interface ary tsy nanana olana tamin'ny fankafizana lalao misy sary avo lenta aho. Mazava ho azy, tsy ho afaka hametaka lalao be loatra ianao na hatrizay, na dia manana aza ny Huawei P9 Lite Fitaovana anatiny 16 GB, 10.5 GB no misy ho an'ny mpampiasa.
Miaraka amin'ny Huawei P9 Lite dia tsy hanana olana amin'ny filalaovana lalao ianao satria manana solo-tena solvent izay mamela anao hamindra rindrambaiko, na firy na firy ny sary ilaina.
Io ihany no azoko kianina. Raha marina fa ny Huawei P9 Lite manana slot micro SD card Amin'izay dia afaka manitatra ny fahatsiarovana hatramin'ny 128 GB isika, ny 16 GB dia toa kely dia kely amin'ny telefaona.
Eny, fantatro fa elanelam-potoana io, fa raha nanana 32 GB izy dia ho lavorary amin'ity lafiny ity. Ankoatr'izay, misy ny rindranasa izay tsy azo apetraka ao amin'ny memoara SD, noho izany dia mametra kely ny fahafahan'ny terminal. Ny teboka mandiso fanantenana iray hafa dia miaraka amin'ny gyroscope. Na ny tsy fanananao azy. Na dia voavaha haingana aza ity olana ity raha mikaroka kely amin'ny Internet ianao.
Ho setrin'izany, ny Huawei P9 Lite dia manana antsipiriany izay tsy ananan'ny Huawei P9: Radio FM. Ahoana no ahafahan'ny kinova decaffeined manana io safidy io? Ho ahy dia fitaovana ilaina io ary tiako ny P9 Lite manana an'io fiasa io.
El mpandahateny toa mihoatra ny marina, na dia manasa antsika aza ny toerana misy azy mba hanafina azy io tsy ara-dalàna rehefa milalao isika. Olana ananan'ny ankamaroan'ny terminal ary ny vahaolana tokana dia ny fametrahana ireo mpandahateny eo aloha, miaraka amin'ny fitomboan'ny habeny.
Antsipiriany iray hafa no tiako hatraiza ny fiasan'ny GPS-nao. Ampiasaiko be io rehefa mandeha aho ary tsy nanana olana tamin'ity lafiny ity satria ny GPS an'ny Huawei P9 Lite dia miasa toy ny manintona. Raha fintinina, telefaona mahay mandanjalanja izay tsy hahatratra ny andrasan'ny mpampiasa rehetra mitady finday antonony tsara - fandaniam-bola latsaky ny 300 euro.
Tontonana IPS, fahombiazana lehibe
Na dia tena voafehin'ny habeny aza ny Huawei P9 Lite dia manana ny efijery mitovy amin'ny P9 ihany izy. Miresaka momba ny a Tontonana IPS 5.2 inch izay mahatratra ny vahaolana Full HD 1080 ary tsy mampihena ny zava-drehetra izany, manome kalitao avo lenta sy haavon'ny haavo tena tsara.
Zavatra antenaina raha mandinika ny 424 teboka isaky ny santimetatra miaraka aminy manana ny efijery misy azy, izay manome loko voajanahary ary tsy misy soritra mahasosotra. Ny calibration miloko dia tena tsara na dia afaka mandanjalanja ny mari-pana amin'ny efijery aza isika mifanaraka amin'ny safidintsika. Mampiavaka ny fitaovana Huawei izay tiako manokana.
El mijery zoro dia mihoatra ny marina, manasa antsika hankafy ny atiny multimedia miaraka amin'ny namantsika, ankoatry ny fanolorana ambaratonga mamirapiratra sy tambiny tsara. Na dia ao anatin'ny tarehin-javatra iray aza isika izay mamely mivantana ny findaintsika ny tara-pahazavana dia afaka mahita ny atin'ny efijery tsy misy olana isika, fa kosa ao anaty trano dia hampidina ny famirapiratany ho azy.
Un tontonana izay nibahana ny avo indrindra volana vitsivitsy lasa izay mifanaraka tanteraka amin'ny Huawei P9 Lite izay mampiseho hozatra amin'io lafiny io, mazava tsara amin'ny cIreo mpanohitra izay tonga manohy ny fitondrana ny sehatra afovoany.
Ny fakantsary Huawei P9 Lite dia gaga amin'ny kalitaon'ny fakana azy
Ity fizarana ity dia mitaky lanja bebe kokoa amin'ny telefaona iray, lasa iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ny resaka fikirana. Na dia tsy afaka nampiasa ny rafitra fakantsary fakantsary roa natao miaraka amin'i Leica aza i Huawei ny P9 Lite dia manana fitaovana solvent tena manolotra vokatra miavaka.
Eo anoloana ny Huawei P9 Lite no ahitantsika a Sensor 8 megapixel miaraka amina aperture 2.0 sy ny hatsaran-tarehy fomba. Ho fanampin'izany, ny telefaona dia mampiasa ny famirapiratan'ny efijery mba hanazavana ny tena ary hamela ny sarin-tenanay horaisina amin'ny tontolo maivana.
Ao ambadiky ny Huawei P9 Lite no ahitantsika a mahery sensor 214 megapixel Sony IMX13 miaraka amina aperture 2.0 sy flash LED. Efa nahita terminal hafa avo lenta hafa isika roa taona lasa izay, toy ny Nexus 6, ka ny zava-bitany dia mihoatra ny voaporofo.
Ireo sary namboarina dia nanolotra kalitao tsara, na dia tsy nahatratra ny hatsaran'ny terminal avo lenta aza. Na ao an-trano na any ivelany tsara ny fakan-tsarin'ny Huawei P9 Lite, manolotra famokarana loko tena tsara sy onitra feno ho an'ireo seho maivana.
El Mode HDR tena tsy dia ilaina loatra izy io satria zara aza misy fahasamihafana momba ny maody mandeha ho azy, zavatra izay ankafizin'ireo mpampiasa te-haka sary mora foana nefa tsy mila miahiahy momba ny fanitsiana ireo masontsivana.
Ny fakantsary an'ny Huawei P9 Lite dia manana maody matihanina izay hahafaly ireo tia sary
Izany rehetra izany dia efa zatra a tena rindrambaiko fakan-tsary feno ary izany dia tsy ampoizina amin'ny asany maro be: mode Beauty, HDR, Sakafo tsara, Tifitra alina, Tifitra Panoramic ...
Na dia ny fiasa hahafaly ireo mpitia sary aza dia miaraka amin'ny maody matihanina, na ho an'ny maody sary na maody amin'ny horonan-tsary, ary hahafahantsika manitsy ny masontsivana rehetra toy ny fifandanjana fotsy, ny haavon'ny tabataba na ny fifantohana, manokatra karazan-javatra mety azo atao.
Raha vaovao ianao eo amin'ny tontolon'ny sary afaka mampiasa maody mandeha ho azy ianao satria maka sary tsara dia tsara, saingy mamporisika anao aho ny hilalaovanao ireo masontsivana samihafa satria mahavariana ireo fahafaha-manolotra atolotry ny fakantsary Huawei P9 Lite.
Ohatra amin'ny sary nalaina tamin'ny Huawei P9 Lite
Fahaleovan-tena mihoatra ny ampy
Ny fizakantena dia iray amin'ireo sehatra manan-danja indrindra ary mila milaza aho fa ny valin'ity Huawei P9 Lite ity dia nekena kokoa. Misy zavatra andrasana raha mieritreritra isika fa nahavita nampiditra a ny ekipa mpamorona Huawei Bateria 3.000 mAh amin'ny terminal misy fatra henjana be.
Amin'ny andro fampiasa mahazatra izay nilalaovako nandritra ny antsasak'adiny, namaky mailaka, nampiasa tambajotra sosialy isan-karazany, nihaino mozika nandritra ny adiny roa ary nitety Internet aho nody niaraka tamin'ny bateria manidina manodidina ny 30 - 35%.
Rehefa nomeko tehina bebe kokoa ny telefaona dia niaritra tamim-boninahitra ilay trot, nahatratra bateria 15%. Ny eo ho eo ny salanisa eo amiko 6 - 7 ora maharitra amin'ny fotoan'ny efijery. Ary i Huawei dia nahatanteraka izany fa ny finday zara raha mandany angovo. Mba hanaovana izany, ny rindrambaiko dia manafoana ny fizotrany any aoriana.
Eny, tsy maintsy alaminao ny rindranasa izay tianay hanohy hiasa na tsy hahazo fampandrenesana WhatsApp ohatra izahay. Amin'ny maha-teboka ratsy antsika dia manana ny zava-misy fa ny Huawei P9 Lite dia tsy manana rafitra mamaly haingana.
EMUI 4.1 manatsara ny olan'ny kinova taloha
Halako foana ny sosona manokana. Aleoko in'arivony mahery Android madio, saingy mbola manohy an'io erre io ihany ireo mpanamboatra, ankoatr'izay maningana, mametraka ny interface. Ary Huawei dia tsy ho diso anjara amin'izany.
Soa ihany fa ny kinova farany an'ny EMUI 4.1 Miasa am-pilaminana izy ary raha vao zatra ny rafitra miorina amin'ny birao, ny marina dia toa rafitra mahafinaritra be amiko io. Tsy misy drawer app? Tsy maninona izany satria azonao atao ny mandamina ny rindranasao amin'ny lahatahiry milamina, na dia tsy ataoko aza izany satria tiako kokoa ny manana azy ireo amin'ny birao maromaro.
Ny interface dia tena tsara tarehy, maro loko ary manana safidy fanamoriana marobe mba hahafahanao mandany safidy maro mikasika ny fikasihana. Asongadino ireo mahery mpitantana lohahevitra avy amin'ny Huawei izay manolotra safidy fanamboarana taonina.
Fanamafisana manokana ny mpamaky ny rantsantanana, raha ny fahitako azy no tsara indrindra eny an-tsena. Ny Huawei P9 Lite dia mampiakatra sensor biometrika mitovy amin'ny sisa amin'ny fianakaviana P9 ary ny marina dia tsara ny zava-bitany.
La manaitra ny hafainganam-pandehan'ny valiny, mamantatra ny dianay amin'izao fotoana izao. Izy io koa dia manana fampiasa sasantsasany izay mampiavaka azy amin'ireo mpifaninana aminy, ankoatra ny famohana haingana ny efijery dia afaka manamboatra fihetsika isika hanatanterahana asa samihafa.
Na dia mbola misy aza ny olona mampifandray ny marika sinoa ho mpanamboatra vokatra tsy dia misy kalitao, Huawei nahavita nanala an'io laza ratsy io tamin'ny alàlan'ny asa varotra tonga lafatra ary nanolotra vahaolana izay nanakaiky ny anarana lehibe eo amin'ny tsena.
Tamin'io fotoana io raha mila telefaona tsara ianao dia tsy maintsy mitodika any Sony, Samsung, LG na HTC dia tapitra; Huawei dia mahazo làlana haingana: Izy io izao no mpanamboatra izay mivarotra finday avo lenta indrindra ao Shina ary saika hahatratra ny Samsung any Eropa.
Fa maninona no mitombo be ny Huawei? Amin'ny terminal toa Huawei Nova Plus na ity Huawei P9 Lite tsy mampino ity, telefaona manome kalitao amin'ny vidiny tena manintona. Ny fahatsapako rehefa avy nanandrana ny Huawei P9 Lite dia mazava tsara: Huawei dia nanao izany indray.
Izaho dia nanolo-kevitra ny olona rehetra nanodidina ahy nandritra ny herintaona hividy ny Huawei P8 Lite, telefaona voavidy tena tsara amin'ny vidiny mirary tokoa. Omeko safidy roa ianao izao: na ny Moto G4 Plus na ity Huawei P9 Lite mahery ity. Avelao izy ireo hisafidy mifototra amin'izay iza no miditra tsara kokoa amin'ny masony, satria tsy isalasalana fa izy ireo dia mpanjaka ao amin'ny elanelam-potoana. Ny safidiko? Ny P9 Lite dia tsy isalasalana fa noho ny famaranana sy ny endriny manintona.
Mamporisika anao koa izahay hamaky ny fanadihadiana sy ny hevitray momba ny Huawei P9
Sarin'ny sary an'ny Huawei P9 Lite
16 GB ny fahatsiarovana toa ahy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei P9 Lite, famakafakana ny mpanjaka vaovaon'ny antonony
Moto M miaraka amin'ny efijery 5,5p "1080" sy RAM 4GB hambara amin'ny 8 Novambra